Mpanamboatra taratasy vita amin'ny tisy vita pirinty natokana ho an'ny tany Sina, mpamatsy, orinasa - teny nalaina - MIMO FLOW CONTROL
Home > Taratasy taratasy mivalona Taratasy taratasy mivalona > Taratasy taratasy mivalona vita pirinty
taratasy kopia, dia karazana fahasarotana amin'ny famokarana dia taratasy indostrialy kolontsaina zokiolona avo indrindra, ny toetra ara-teknikan'ny vokatra dia indrindra: miaraka amin'ny tanjaka ara-batana ambony, ny fitoviana sy ny mangarahara ary ny fananana ambonimbony, tsara, malama, malama, tsy misy fasika. , pirinty tsara. Ny taratasy copie colour dia vokatra azo avy amin'ny taratasy kopia,
1.fampidirana vokatra nyTaratasy taratasy mivalona vita pirinty:
taratasy kopia, dia karazana fahasarotana amin'ny famokarana dia taratasy indostrialy kolontsaina zokiolona avo indrindra, ny toetra ara-teknikan'ny vokatra dia indrindra: miaraka amin'ny tanjaka ara-batana ambony, ny fitoviana sy ny mangarahara ary ny fananana ambonimbony, tsara, malama, malama, tsy misy fasika. , fanontana tsara.Ny taratasy fandikana loko dia vokatra azo avy amin'ny taratasy kopia, izay amin'ny ankapobeny dia vita amin'ny taratasy kopia fotsy nolokoana miaraka amin'ny loko samihafa. Azo zaraina ho karazany roa izy io: ny fandokoana anaty sy ny fandokoana ivelany.
2. Parameteran'ny vokatraTaratasy taratasy mivalona vita pirinty:
Ny anaran'ny vokatra
Taratasy fandokoana loko
Midira amin'ny OARS
Isan'ny fonosana tsirairay
Fonosana akanjo, kiraro, divay, voankazo, fitaovam-pitaterana, kilalao, fanomezana, poketra, boaty fanomezana, asa-tanana, sns
Misy habe azo atao
miaraka amin'ny tanjaka ara-batana avo kokoa, ny fanamiana sy ny mangarahara tsara, ary ny fananana amboniny tsara, tsara, malama, malama, tsy misy fasika bubble, fanontana tsara.
4. Torolàlana momba ny fampiasana ny vokatra an'nyTaratasy taratasy mivalona vita pirinty:
Fampiasana taratasy kopian'nyTaratasy taratasy mivalona vita pirinty:
1. Famonosana voankazo: taratasy miendrika voaroy dia taratasy manandanja amin'ny fonosana voankazo any Shina Avaratra. Nampiasaina tamin'ny famonosana poarazy lanezy tamin'ny voalohany, noho izany dia nahazo ny taratasy BBB1 pear pear izy.
2. Akanjo, kiraro, entana vita amin'ny hoditra, fonosana fitaovana: any amin'ny tsena atsimon'i Shina, ny taratasy kopia no tena ampiasaina amin'ny akanjo, kiraro, entana vita amin'ny hoditra ary fonosana vokatra hafa.
3. Porcelain, divay, fonosana amin'ny asa-tanana: tsy voaporofo amin'ny hamandoana, afaka miaina, miaro, mamolavola ny anjara asany.
Fanontana taratasy 4 kopia: ny taratasy kopia dia misy vokany tsara amin'ny fanontana, azo atao pirinty monochrome, loko roa, loko efatra, orinasa Logo, marika famantarana, azo nolokoina mena, manga, volamena, volafotsy ary loko hafa.
5. Ho an'ny firavaka amin'ny kanto sokitra tombo-kase: noho ny toetra manokana amin'ny taratasy fandikana dia tsy miparitaka ny ranomainty, ka matetika no ampiasaina amin'ny sary sokitra ny tombo-kase.
(1) Ny vidiny dia miankina amin'ny akora, habe, pirinty, sanganasa ary habetsahana;
(2) Homena teny nindramina tsara indrindra rehefa nahazo ny famaritana feno ny kitaponao;
(3) Mpanamboatra mivantana sy vidiny mifaninana;
(1) Maimaimpoana ny santionan'ny tahiry, tongasoa ny santionany manokana;
(2) Ny fiampangana santionany dia haverina na tsia, arakaraka ny fatran'ny habetsahana;
F4: INONA INDRINDRA IZAY IZAO?
Miankina amin'ny filaminana, mazàna isika afaka mandefa ao anatin'ny 7-10 andro ho an'ny kely.
F5: AHOANA NO FOMBA FIVORIANA QUICKATION?
Azafady mba omeo ny fampahalalana momba ny vokatra toy izao manaraka izao:
1) habe: L__cm * W__cm * H__cm
3) Fitaovana: taratasy __
4) Logo: __ (loko / lafiny iray na lafiny roa / teknika / zavakanto)
Taratasy misy loko
Tissue taratasy Sydney